Mozilla dia manafoana ny Firefox 64 Bits ho an'ny Windows | Avy amin'ny Linux
@Jlcmux | | fampiharana, GNU / Linux, About us
Marina izany, nanambara fotsiny i Mozilla fa hitsahatra tsy hanohana intsony izy ireo Firefox hatramin'ny 64bits ho an'ny Windows. Toa hafahafa sy mifanohitra amin'izay izany fa ny rafitra ankehitriny dia mazàna mampiasa 64bits noho ny antony fampisehoana.
Fitsapana mora vidy ity ho an'ireo mpampiasa Windows, saingy vaovao mazava be ho an'ny Linuxers. Satria misy ny fifidianana mazava kokoa momba ny rafitra loharano misokatra ..
Mozilla dia mitanisa ny antony manapa-kevitra ny hanao an'io:
Plugins maro no tsy misy amin'ny 64bits
Ny plugins izay misy dia tsy mandeha araka ny tokony ho izy.
Ny lesoka notaterin'ireo mpampiasa 64bit dia tsy manana laharam-pahamehana satria miasa amin'ny zavatra hafa izahay.
Sorena ho an'ireo mpampiasa 64bit satria mahatsapa (sy) ao aoriana izy ireo.
Ho fanampin'izay, misaotra ireo ekipa rehetra niara-niasa tamin'ny tetikasa i Mozilla.
«Misaotra an'ireo rehetra nandray anjara tamin'ity kofehy ity. Noho ny fampahalalana efa misy dia nanapa-kevitra ny hanohy ny fanafoanana ny fanamboarana windows 64-alina isan'alina sy isan'ora aho. Azafady mba hodinihinay fa nikatona io adihevitra io raha tsy hoe misy vaovao vaovao manakiana tokony haseho. »
Tsara. Tapitra fa i Mozilla dia nantsoina tetikasa hafa Watervd. Browser miorina amin'ny Mozilla Firefox izay tsy manohana afa-tsy Windows sy 64 bits fotsiny.
Wateropio dia mpizaha fahombiazana avo lenta mifototra amin'ny kaody loharano Mozilla Firefox. Waterhio dia natao manokana ho an'ny rafitra 64-bit, misy zavatra iray ao an-tsaina: hafainganana.
Ny hevitro manokana dia hoe atao amin'ny fisarahana izany Mozilla Firefox y Waterfox eo anelanelan'ny Linux sy Windows. Izany no ilazako azy satria afaka taona vitsivitsy dia miasa amin'ny 64bits ny ankamaroan'ny solosaina (raha tsy izy rehetra ... Ary raha mpampiasa Windows aho dia hampiasa Waterox ary raha mpampiasa linux aho dia hampiasa Mozilla Firefox.
Manao ahoana ianao? Inona araka ny eritreritrao no hitranga?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Mozilla dia manafoana ny Firefox 64 Bits ho an'ny Windows
Mahagaga ahy izany. Toa te hanasaraka ny firefox ho tetikasa roa izy ireo, nefa maninona no te hanao an'izany ???
Ahoana raha hanomboka hivarotra Waterox izy ireo mba hananana fanampiana? : ALIENS:
Eny. Mety ho fanazavana ara-dalàna izany. Na dia, araka ny voalazan'i Pavloco etsy ambany aza, tsy toa tetikasa Mozilla izany. Raha ny tokony ho izy dia toa ny fork iray nataon'ny olona tsy nankasitraka ny fanampiana ratsy azon'ny firefox teo am-baravarankely 64-bit. Misy fampahalalana bebe kokoa eto: http://www.neoteo.com/waterfox-firefox-alternativo-de-64-bits ary efa ho herintaona io lahatsoratra io, ka tsy manomboka izao.
Mizara ny rohy koa aho
http://www.mozilla.org/projects/powered-by.html - Any no mivoaka ny tetikasa Waterhio.
Misy tetikasa rindrambaiko izay mampiasa kaody Mozilla, tsy midika izany hoe notanterahin'i Mozilla izy ireo.
Watervd, araka ny efa nolazain'izy ireo, dia fork an'ny Firefox izay mitady marina hanonerana ny tsy fisian'ny kinova ofisialy Firefox 64-kely ho an'ny Windows.
Kaodin'i Mozilla Firefox io, fa tsy an'i Mozilla ilay tetikasa
Ny marina dia tsy hitako hoe ny tsara indrindra amin'ny hevitra, dia ireo izay te hanomboka hiditra amin'ny tsena lehibe kokoa ... Midika izany fa tsara toerana izy ireo saingy te-ho avo kokoa, mazava ho azy fa te hifaninana, ary hampisaraka ny tetikasan'izy ireo amin'ny vokatra roa samy hafa izay noforonin'izy ireo. Io zavatra io ihany, toa tsy mety amiko, mainka fa androany, fa tsy mikasa ny hampisaraka ny rafitra malalaka amin'ny tompony fa misy fironana mankany amin'ny fiaraha-miasa…
Tsy mijery izany amin'ny maso tsara indrindra ekeko
Toy ny tranga eMule izay antsoina toy izao ho an'ny kinova Windows sy aMule ho an'ny kinova Linux sy Mac ……… saingy programa mitovy ihany ireo.
eMule dia ho an'ny Windows ary aMule dia ho an'ny Windows, Linux ary Mac, tsy mitovy izy ireo fa fandaharana mitovy.
Etsy ankilany, te-hiteny aho fa ny fanomezana lanja an'io sy ny fanomboana an'i Mozilla dia toa "hadalana" ho ahy, satria ny fampiharana 64-bit dia mandany RAM bebe kokoa ary manararaotra mihoatra ny 3GB, izay ao amin'ny browser dia mandany mihoatra ny 3GB RAM? Ary koa, ny kinova 32-bit dia miasa tanteraka ao amin'ny Windows 64-bit ary zavatra iray izay miahy ny komina 3 ny mpampiasa tsotra.
Google Chrome koa dia tsy manana kinova 64-bit ho an'ny Windows ary tsy mbola hitako na aiza na aiza io fanairana io. Andao hatsahatra ny fisintomana ary aleo hiatrika izany, Firefox dia hanohy hiasa mitovy amin'ny kinova 32-bit amin'ny Windows 32-bit sy Windows 64 tsy misy olana.
Toa an'i Nano, heveriko fa tsy hevitra tsara ankoatry ny fihenan-tsofina aterak'izany
Ny fiaraha-miasa sy ny fampidirana ny lozisialy mihazakazaka amin'ny fitaovana isan-karazany dia heveriko fa hevitra tsara kokoa, satria any amin'ny toerana rehetra ianao ary manome toerana tsara kokoa ity (heverina fa fahitan'ny olona tao Mozilla izany).
Raha eritreritra ratsy kely dia tsy fomba iray hanomezana tehamaina kely an'i Microsoft ity amin'ny famelana azy tsy hiditra ao amin'ny Windows 8 ao amin'ireo vy miasa manokana an'ny Microsoft?
Teôria tsara izany ... Tokony hiasa amin'ny Tantara sy ny lohahevitr'ireo mpanamory sambon-danitra taloha ianao .. hehe
Mahaliana izany, eny angamba. Tafintohina angamba izy ireo.
Firefox dia mbola tsy iray amin'ireo mpizaha ankafiziko indrindra, heveriko fa tetika hendry ny zava-drehetra, mahafoy tetikasa iray ary mandoa vola hafa, rehefa nanana windows 64-bit aho dia nianjera tamin'ny horonan-tsary YouTube izany, rehefa mandeha na maka azy ireo dia tsy tafiditra mihitsy ireo plugins. nampidirina tsara izy ireo, heveriko fa misy safidy hafa tsara kokoa amin'ny linux. mahafaly
Safidy tsara kokoa noho Firefox Tsy misy ho ahy, na amin'ny Linux, na Windows na Mac OS X. Ity browser ity, miaraka amin'ny fiakarana sy fidinana, dia voaporofo ho ny tsara indrindra sy feno indrindra, na ho an'ny mpampiasa farany na ho an'ny mpamorona. Amin'ireo rehetra nanandramako dia io no manome tranonkala indrindra, endritsoratra ary izay manaraka tsara indrindra ny fenitra. Fa mazava ho azy, izany no hevitro fotsiny.
Mitovy ny eritreritro. Ilay iray izay akaiky azy indrindra dia mety ho Chromium, saingy raha ny zavatra niainako manokana dia latsaka kely raha oharina amin'ny Firefox.
Tena marina, ho ahy, tsy misy. Ny marina dia tsy Chrome, Opera, na Chromium, na dia manohana ity farany aza izy.
Tsy hitako izay maharatsy ny fanapahan-kevitry ny Mozilla Foundation handidy ny mpampiasa Windows amin'ny fampiasana ny tranokalan'izy ireo (raha izany no hevitra). Manana tombony sy fatiantoka izy io mazava ho azy, fa raha dinihintsika tsara fa ny mpikaroka dia mamela zavatra betsaka irina ary siny tantely ho an'ny biby mampidi-doza ao amin'ny tambajotra, satria manana safidy maro ny mpampiasa Windows.
Firefox dia raha tsy ny iray amin'ireo mpitsidika tsara indrindra ary ny fahaizany mivezivezy sy mampivoatra dia kilasy voalohany.
Tsara ho an'ny Linux !! Tsikelikely, tsikelikely,… dia azontsika ny toerana sahaza antsika.
Heveriko fa tsy tetik'asa Mozilla ny Waterfua. Raha ny marina dia heveriko fa manitsakitsaka ny lisansa Firefox izany, satria tsy hitako ny kaody loharano.
Mivoaka ilay tetikasa.
Azafady fa azoko tsara fa ho an'ny Windows 64 kely fotsiny? ary ireo manana sombina 32? sa natao ho an'ny windows amin'ny ankapobeny.
Ho an'ny Windows 64bits ihany
Misafotofoto dia hoy izy:
Matoky aho fa hanjaka eo amin'ny birao Linux ao anatin'ny taona vitsivitsy. Ny vahaolana rahona dia manala tsikelikely ny sisintany misy eo amin'ny Linux sy Windows, eo amin'ny rindrambaiko, ka tsy ho ilaina intsony ny misafidy "an-keriny" ny Windows OS satria ny fampiharana ilainao fotsiny novolavola ho an'io sehatra io.
Mamaly an'i Tragk
Mino aho fa hanampy betsaka amin'ny linux ny fampiharana an-tranonkala sy rahona
JorgeE dia hoy izy:
Ny teôlôko, na dia toa lany andro aza, dia izy ireo no mandray ny dingana voalohany hanafoanana ny firefox ary hanomboka hahazo tsena amin'ny waterox, am-boalohany ao amin'ny windows 64-bit ary avy eo amin'ny rafitra 64-bit hafa, na linux na mac, miala miadana Rafitra 32-bit any ankilany.
Valio amin'i JorgeE
Na izany na tsy izany dia tsy mampiasa windows aho ka tsy misy fiantraikany amiko ny marina, fa raha amin'ny farany io tombontsoa io dia mahasoa ny mpampiasa Linux rehetra, dia tongasoa!
Heveriko fa io no fanapahan-kevitra ratsy indrindra azon'izy ireo raisina, raha toa ka tsy mandeha tsara ny firefox amin'ny varavarankely 64-bit, dia tokony hanery ilay 32-bit farafaharatsiny izy ireo, na hiantso azy io hoe firefox64-bit, fa ny famelana ilay marika tsy hitako fa hahasoa azy ireo izany.
Handeha hisintona firefox ny olona ary rehefa mamaky rano izy ireo dia aleony misintona chrome na mifikitra amin'ny IE.
Fitsapana mora vidy ity ho an'ireo mpampiasa Windows, saingy vaovao mazava be ho an'ny Linuxers. »
Mifalia amin'ny fahorian'ny sasany? Debian ny rafitra tiako indrindra, fa ohatra amin'ny solosaina soratako dia manana windows ho an'ny mifanentana sy ho an'ny lalao aho. Ary tsy mitovy hevitra amin'izany aho.
Nahoana ianao no mieritreritra fa faly aho? Nanoratra fotsiny aho fa ambany ny kapoka ataon'ny mpampiasa Windows .. Iza no tsy izy?
Raha jerena ny fametrahana azy ho rafitra miasa dia toa tsy mitombina ny manohitra an'i Windows. Saingy toa hitako fa tsy jerena ireo fotokevitra ifotony, "ny fanohanana ratsy dia antony mahatonga ny fifaninanana fotsiny."
Raha ny fahitako azy, ary tsy mila miditra amin'ny vinavina, izany no antony manery.
Eny, toy izao, amin'ny fomba super troll, hehehe, faly aho, na dia fantatro aza fa tsy hevitra tsara izany. Rehefa dinihina tokoa, na dia nilaza mazava aza ry zalahy tao amin'ny Microshit fa hijanona tsy hamorona Windows 32 bit izy ireo, heveriko fa tsy azo atao izany, tsy hanao izany izy ireo.
Salama, azafady fa vaovao ratsy ity, hitako fa ity bilaogy ity dia navoakan'ny bilaogy teknolojia maro, na izany aza tsy mbola nisy kinova firefox 'ofisialy' ho an'ny fikandrana 64-bit, Waterox dia vondrona iray izay manaova kinova ho an'ny hoy ny rafitra, saingy mbola kinova 'tsy ofisialy' io, etsy ankilany ireo namanay avy amin'ny mozilla dia nahita fa somary mahatsikaiky ity ary nasehon'izy ireo izany tamin'ny fanaovana meme ny lohahevitra ao amin'ny http://mozillamemes.tumblr.com/ Tsara foana ny mahita ny lafiny mahafinaritra 😀
Swiftoks dia safidy tsara indrindra amin'ny Firefox, indrindra satria nohamarinina araka ny fanodinam-bokatra, saingy heveriko fa najanona izany.
Tamin'ny fametrahana Debian farany napetrako swiftorta, noheverin'izy ireo fa ny fijanonana amin'ny kinova 3.6.3 no tsara indrindra, ary nilamina tsara ny navigateur. Ary Seamonkey, dia nanaraka ny fivoarany, tao amin'ilay rohy nalefako no ahafahan'izy ireo manatsara sy maka ny rivotra taloha ao aminy. mahafaly
Ahoana ny fanesorana ireo fonosana kamboty ao amin'ny Arch